WHO: Xaalladdu waa ay ka sii dari kartaa haddii la khafiifiyo xayiraadaha Covid-19 - Tilmaan Media
WHO: Xaalladdu waa ay ka sii dari kartaa haddii la khafiifiyo xayiraadaha Covid-19
Madaxa Hay’adda Caafimaadka Adduunka ayaa dunida uga digay in la qaado xayiraadaha loogu talagalay la dagaalanka faafidda coronavirus isagoona walaac ka muujiyay in xaalaada ay ka ii dari karto haddii ay taasi dhacdo.
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in dalalka caalamka ay ka foojignaadaan khafiifinta xayiraadaha, xitaa inkastoo ay dhaqaalaha saameyn ba’an ku yeesheen xayiraadahaasi.
Spain iyo Talyaaniga oo ah dalalka Yurub uu sida ba’an u saameeyay fayraska Corona ayaa haatan labaduba waxay khafiifinayaan qaar ka mid xayiraadihii ay ku soo rogeen dalalkooda.
Guud ahaan dunida waxaa laga xaqiijiyay 1.6 malyan oo kiis halka dhimashaduna ay mareyso in ka badan 101,000.
Dr Tedros oo ka hadlayay magaalada Geneva ayaa sheegay in hoos u dhac xanuunka Covid0-19 laga dareemay qaar ka mid dalalka Yurub.
Waxa uu sheegay iney jiraan qorshooyin lagu khafiinayo xayiraadaha kuwaasi oo ay WHO kala shaqeyneyso dowladaha caalamaka balse ma ahan in si dhakhsiya loogu dhaqaaqo.
Sida ay Spain iyo Talyaaniga u khafiifinayaan xayiraadaha?
Dowladda Spain ayaa isu diyaarineyso in Isniinta shaqaalaha qaar ka mid ah waaxaha dhismaha iyo warshadaha u ogolaato iney dib u bilaabaan shaqooyinkooda.
Spain ayaa Jimcihii diwaan gelisay tirada dhimashadii ugu yarayd muddo 17 maalmood ah, taasi oo gaadhay 605 qof. Sida laga soo xigtay tirakoobkii ugu dambeeyay, tirada shimashada Spain ee la xiriirta Coronvirus ayaa gaadhay 15,843.
Raysal Wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa sii kordhiyay xayiraadaha saaran dalkiisa ilaa 3-da bisha May, hase yeeshee ganacsiyo yar-yar oo xidhna tan iyo 12-kii Maarso ayaa maalinta talaadada loo ogolaan doonaa in dib loo furo.
Dhanka kale waxaa aad looga deyrinayaa xuduudaha isu furan taasi oo la aaminsan yahay in si fudud uu ku faafi karo Fayraska Corona.
Dalalka caalamka waxay xirteen xudduudahooda, haddana dad badan oo aan laga warqabin ayaa ku qulqulaya xudduudaha caalamka. Wadamo badan ayaana digniinno ka soo saaray faafitaanka fayraska ee aan lagu xakameyn karin xuduudaha ballaaran ee isu furan.
Bishii March, in ka badan 150,000 oo u dhashay Afghanistan ayaa ka soo laabtay Iiraan, oo ka mid ah dalalka uu sida ba`an u saameeyay coronavirus – kumannaan kale ayaa maalin walba isu gudbo.
Tobannaan kun oo dheeraad ah ayaa sidoo kale dhowaan ka soo laabtay Pakistan – oo ka mid ah dalalka Koofurta Aasiya ku yaalla ee uu sida ba`an ugu faafay fayraska Covid-19.
Dalalkaas ayaa la daalaa dhacaya xakameynta dhaqdhaqaaqyada ka socda xudduudaha aan ammaanka ahayn isla markaana aan sharciyada ka jirin.
Illaa iyo haatan, Afghanistan kama mid ah dalalka uu aadka u saameeyay fayraska, waxaa laga soo sheegay 423 kiisas iyo 14 dhimasho ah, balse qulqulkan ayaa laga muujiyay walaac ah in ay sii kordheyso tirada dadka isku gudbinaya fayraska.
“Marka la eego tirada dadka laga yaabo inay fayraska qabaan ee ka gudbay xadka, waxaan rajeynayaa in tirada kiisaska iyo dhimashada ee Afghanistan ay sare u kacdo,” ayay tiri Natasha Howard, oo cilmiga caafimaadka dunida iyo dagaallada ka dhigta Jaamacadda National University ee Singapore.
Sidey Afghanistan u xakameyn doontaa fayraska?
Wasaaradda caafimaadka bulshada ee Afghanistan ayaa saadaalineysa in illaa 16 milyan oo ka mid ah 30-ka milyan ee bulshada dalkaas ay qaadi karaan fayraska, sida ay ka soo xigatay WHO.
Waheedullah Mayar, oo ah afhayeen wasaaradda, ayaa sheegay in arrinta ugu daran ay tahay in illaa 700,000 oo qof ay u baahnaan doonaan in isbitaalka la dhigo, halka 220,000 oo ka mid ahna ay u baahan karaa daaweynta qeybta xaaladaha degdegga ah. Sidoo kale 110,000 oo tiradaa ka mid ah ayaa u dhiman kara Covid-19.
Guud ahaan isbitaallada Afghanistan waxaa yaalla 10,400 oo sariiro ah. Gobolka Herat, qiyaastii waxaa yaalla ilaa 12 oo qalabka bukaannada ka caawiya neefsashada ah.
“Afghanistan ma yeelan doonto tiro badan oo sariiro ah xitaa 10-ka sano ee soo socda,” ayuu yiri, isagoo intaas ku daray in waaxaha caafimaadka ay diiradda saarayaan tallaabooyinka ka hortagga.
Kabul waxaa gebi ahaanba saaran bandow, isu imaatinnada bulshada ayaana laga mamnuucay Herat.
Balse bulshada dalkaas, waxay badankooda qabaan xanuunno hore sida qaaxada, kansarka iyo sokorta waxaana jira illaa 2.5 milyan oo carruur oo nafaqo darro ay haysato, sida ay sheegtay hay`adda gargaarka ee Save the Children.
Balse haddii ay xaaladda Afghanistan ay sidaas u xun tahay maxay dad badan u doonayaan inay dib ugu soo laabtaan?
Badankood waxay ka soo cararayaan xanuunka Covid-19 ee ka dillaacay Iiraan iyo Pakistan bandowga ayaana ciriir geliyay fursadaha dhaqaale. Dadka ayaa sidoo kale ka cabsi qaba inaysan halkaas ka heli karin daaweyn caafimaad.
“Ra`yiga dadka soo laabanaya ayaa ah, haddii aan dhimanayo waxaa fiican inaan dalkeyga ku dhinto,” ayuu yiri Mr Rahimi.
Khubarrada qaar ayaa aaminsan in haatan laga daahay xakameynta faafitaanka fayraska ee gudaha Afghanistan. Waxaana aad u yar caawinaadda laga heli karo beesha caalamka oo iyaguba la daalaa dhacaya fayraska.
Safiirka JFS ee dalka Turkiga oo bulshada la wadaagay tallooyin & wargalin ku saabsan COVID-19
Kulan lagu heshiisiinaayo laba beel oo ka dhacay Kismaayo